Itoobiya: Rabshadaha dhacaya waxay ka tarjumayaan xaaladda dalku uu ku sugan yahay | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Itoobiya: Rabshadaha dhacaya waxay ka tarjumayaan xaaladda dalku uu ku sugan yahay
Itoobiya: Rabshadaha dhacaya waxay ka tarjumayaan xaaladda dalku uu ku sugan yahay
Maalinta sabtida waxaa si rasmi ah magaalada Addis Ababa soo gaaraya jabhadda oromada ee OLF oo ku dhawaad nus qarni dagaal hubeysan kula soo jirtay dowladda Itoobiya.
Waxaana loo diyaariyey soo dhaweyn aad u weyn oo ay u diyaariyeen dowladda Itoobiya iyo taageerayaasha Jabhadda oo ah qowmiyadda ugu badan dalka Itoobiya.
Maalma ka hor taageerayaasha Jabhadda OLF oo diyaar garowga soo dhaweynta ku diyaarinayey magaalada Addis Ababa iyo dhalinyara ka soo horjeedday ayaa waxaa dhex maray iska horimaad ay dad ku dhinteen qaar kalana ay ku dhaawacmeen.
Wariyaha BBC-da qaybta Af-amxaariga uga soo warrama magaalada Addis Ababa ayaa wuxuu maanta booqday xaafadihi ay maalma ka hor iska horimaadyada ku dhex mareen dhinacyadi iska soo horjeeday.
Wuxuuna wariyuhu sheegay “goobihi ay rabshaduhu ka dhaceen inkasta oo ay maanta xasilooon yihiin haddana waxaa weli laga dareemayaa saansaan colaadeed gaar ahaanna xaafadaha Winget, Atobis-tera, Pawlos, Medihanalam, Piasa iyo Markaato.”
Waxaadna arkeysaa ayuu yiri “meherado badan oo xiran oo aan billaabin adeegyadi caadiga ahaa sida dukaannada, iwm…”
Wariyuhu wuxuu intaa ku daray “xaafadda Winget oo ay rabshadihi ugu badnaa ka dhaceen maalinti Arbacada gebi ahaanba meheraduhu wey xiran yihiin iyada oo iisu socodka dadka iyo gaadiidkana uu aad ugu yar yahay waddooyinkana xaafaddaasi.”
Waxaadna waddooyinka aad ku arkeysaa ayuu yiri “dad badan oo lugeynaya oo waayey gaadiidki shacabka ee ay isticmaali lahaayen ”
“Xaafadaha Pawlos dhismayaasha waaweyn ee ku yaalla waxaa ka babbanaya calanka jabhadda Oromada ee OLF.”
“Halka aad dhinaca kalana arkeyso dhalinyaro tira badan oo sita calanka seddexda midab ka kooban ee Itoobiya oo aan weli dalka laga sharciyeyn balse ay adeegsadaan ururrada mucaaradka iyo taageerayaashooda.”
Qaar ka mid ah dadki lugeynayey oo uu wariyuhu weydiiyey waxa ay dareemayaan ayaa waxay u sheegeen “laga billaabo maalinti ay rabashadaha ka dhaceen magaalada ilaa iyo maantadan la joogo iney istaageeen gaadiidki shacabka oo xaafaddooda iman jiray.”
Wariyuhu waxaa kale oo uu sheegay inaad waddooyinka ku arkeysid gaadiid boolis tira badan ay saaran yihiin oo ku sii qulqulaya xaafadihi ay maalma ka hor rabshaduhu ka dhaceen .Booliska federaalka Itoobiyana wuxuu xaqiijiyey rabshadihi magaalada Addis Ababa xaafado ka mid ah ka dhacay inuu “hal qofna uu ku dhintay dad badanna ay ku dhaawacmen”.
Previous articleWargeyska Washington Post ee ka soo baxa wadanka Maraykanka ayaa wax ka qoray nidaamka dimuqraadiyadeed ee ifafaalihiisu ka soo muuqdo dalka Itoobiya.
Next articleDaawo 74% Mashaariicda Sanduuqa SDF waxaa la Siiyaa Gobalada galbeed ee Somaliland Sidaasi ma cadaaladbaa, Mayorka Burco